| Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကို scan APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » ဒီနေရာတွင်က Android အားလုံး Insights အပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်လုပ်နည်း
ဤတွင် APK ကိုအန်းဒရွိုက်အားလုံး Insights အပေါ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်လုပ်နည်း
ကမ္ဘာတစ်လွှားဘီလီယံခန့်2ကျော်တက်ကြွ devices များနှင့်အတူအန်းဒရွိုက်နေဆဲပလက်ဖောင်းဈေးကွက်ထဲမှာခြင်္သေ့ဝေစုရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။ သို့သျောလညျးကို default QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအရာအများအပြားမှာ Android devices များ, ဆဲရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Android device ကို default အနေနဲ့နှင့်မည်သို့ Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်မှအားဖြင့် QR codes တွေကိုထောက်ခံပါတယ်ရှိမရှိသိရန်ဖတ်နေထားပါ။
QR codes တွေကိုလမ်းဖြင့်, ဘာတွေလဲ?
သင်မသိသောအမှု၌, QR codes တွေကိုရိုးရိုး2ရှုထောင်ဘားကုဒ်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုကုဒ်များသို့မဟုတ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုရိုးရှင်းစွာ codes တွေကိုပေါ်တွင်ဝှက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များဆံ့။ နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်းနှင့် function ကိုအတွက်တဦးတည်းကသူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပြီးသူတို့ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့်အတူအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကြှနျတေျာ့ကို Android device ကိုထောကျပံ့ဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကို default အားဖြင့်ပါသလား
သင့်ရဲ့ device ကို QR codes တွေကိုဖတ်နိုင်ရှိမရှိထွက်ရှာရန်, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Camera app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့များအတွက်ကုဒ်မှ 2-3 စက္ကန့်ကအာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ enabled လျှင်ဒါဟာသင်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကဖွင့်နိုင်ပါသည် QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိမှုများ app ထဲမှာ။ သငျသညျခြိနျညှိအတွက် QR codes တွေကိုမတှေ့လြှငျ, ကံမကောင်း, QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးစရာထိုကဲ့သို့သော default အနေနဲ့အင်္ဂါရပ်လည်းမရှိ။ QR codes တွေကို (ကျနော်တို့နောက်မှဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်) scan မှမရရှိနိုင်အများအပြား Third-party apps များရှိပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်မရဖဲ့ခြွေ။
ကကင်မရာ app ကိုနှင့်အတူ Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကိုစကင်ဖတ်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင့်အိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးသော့ခတ်မြင်ကွင်းထဲကနေအားဖြင့်ကင်မရာ icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်က default ကင်မရာ app ကိုဖွင့်လှစ်။
ဖို့အတွက် QR code ကိုရန်သင့်ကင်မရာကိုညွှန်ပြအနည်းဆုံး3စက္ကန့်တည်ငြိမ်သင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ရှောက်။
QR ကုဒ်ကိုအမျိုးအစားအရ, ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ browser ကိုအတူ URL ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ကလိပ်စာကဒ်လျှင်သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ device ကိုမှအဆက်အသွယ်ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကို Android9Pie သို့မဟုတ် Oreo running ကိရိယာရှိပါက, သင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ QR ကုဒ်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ သငျသညျပြီးသားမြန်ဆန်လုံခြုံ, နှင့်ကိရိယာမှတိုက်ရိုက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူဖြစ်သော Google မှလက်ထောက်, ရှိသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ Google မှလက်ထောက်ဖွင့်ဖို့အိမ်ပြန်ခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ။
Google ကလက်ထောက်ဖွင့်လှစ်သောအခါသင်အသုံးပြုနေတဲ့လက်ထောက်၏ဗားရှင်းသည်နှင့်အညီ, ညာရှိမှန်ဘီလူး button ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စကားသံကိုနားထောငျကနေစောင့်ရှောက်ရန်အရောင်စုံအစက်ပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ဒါဟာကီးဘုတ်, မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်မှန်ဘီလူးနဲ့တူသစ်ကိုရှေးခယျြစရာကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာအ "မှန်ဘီလူး" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ။
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကမှန်ဘီလူးကိုသက်ဝင်။ အဆင့်များကိုလိုက်နာပါကသင့်ကင်မရာဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, သင် features တွေမိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။
ကင်မရာကိုအပေါ် QR မှရွှေ့ပါ။ ဒါဟာ execute ရန်သင့်အားဖို့အတွက် QR ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဂူးဂဲလ်မှန်ဘီလူး App ကို Download လုပ်ပါ
ဒါဟာအထက်တွင် option ကိုထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ဟန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ရပါမည်။ သင်ရုံအခြား app ကို download မှမလိုချင်ကြဘူးဆိုရင်အထက် option ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ အားလုံးနီးပါးနောက်ဆုံးပေါ် Android ထုတ်ကုန်ကို Google လက်ထောက်ရှိသည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျကိုအခြား app ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအခြားမည်သည့် app ကို install မလုပ်ခင်ပထမဦးဆုံး Google ကမှန်ဘီလူးစမ်းပါ။
Google Play စတိုးသွားပြီး Google ရဲ့မှန်ဘီလူးကိုရှာ။ က Install လုပ်ပါ။
ဒါဟာကင်မရာ access ကိုနဲ့တူခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းစွာအဖို့အတွက် QR code ကို scan နှင့်သင်ပြုသောအမှုနေကြသည်။
ဖို့အတွက် QR code ကို scan ဖတ်အခါတိုင်းယခုသင်မှန်ဘီလူးကိုသုံးနိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖို့အတွက် QR Code ကို Scanner Apps ကပ
သင်တစ်ဦးအဟောင်းတွေက Android device ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့ရှိနေပါတယ် ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှ -
ဘား-Code ကို Reader ကို
သင်အလွယ်တကူဒီ app တွေနဲ့ 1D နှင့် 2D ဖို့အတွက် QR Code ကို scan နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစာကြည့်တိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု, အသေးစားစတိုးဆိုင်များနှင့်စျေးဝယ်အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘားကုဒ်ကိုကို formats ထောက်ခံပါတယ်။
ဒီ app Scan ဖတ်နဲ့အီးမေးလ်ကနေတဆင့် codes တွေကိုပို့ပေး, သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအခြားအက်ပ်ရန် / Paste codes တွေကိုကော်ပီကူး။ သငျသညျကိုလညျး web ပေါ်မှာ codes တွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Kaspersky တို့က QR Scanner
အခမဲ့ QR Scanner Kaspersky တို့က Android အတွက်ကိုလည်းလင့်များနှင့် malware phishing ရန်သင့်အားဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်လင့်များရှိသည်သောအတု QR codes တွေကို, ရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးအေးမြနဲ့နေရာလေးကို QR စာဖတ်သူကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အေးမြဖို့အတွက် QR စာဖတ်သူကိုနှင့်စကင်နာသင်တို့ကိုလည်း scan ဖတ်မတိုင်မီပုံများ, စာသားများနှင့်ဖို့အတွက် QR code ကိုမှပူးတွဲ URLs များကိုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစစ်ဆေးကူညီပေးသည်။
မျဉ်းနောက်ကွယ်မှမဆိုစွန့်စားမှုလည်းမရှိဆိုပါက code ကို scan ဖတ်နေစဉ်, သင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရလိမ့်မယ်။ သင်အလွယ်တကူမဆိုအမှားများမရှိဘဲအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့အလွယ်တကူအဆက်အသွယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ vCard ကိုအပေါ်ကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းမှာပုံများ, လင့်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်ဖို့အတွက် QR code ကို scan ဖတ်ပြီးနောက်, သင်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းစက္ကန့်အတွင်းကို Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖို့အတွက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။
QR Droid နဲ့ဘားကုဒ်, QR Code ကိုများနှင့်ဒေတာများ Matrix အင်အားကြီးသို့သင့်ရဲ့ device ကိုဖွင့်။ , မျှဝေခြင်းတင်သွင်းများနှင့်ဒေတာများသုံးပြီးအနည်းငယ်ဘုံဘိုင့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ QR Droid အလွန်အလိုလိုသိ, Multi-language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, သင်ဖို့အတွက် QR codes တွေကို ချိတ်ဆက်. လမ်းကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်မှအပြည့်အဝပေးထားသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ဒါဟာနီးပါးဘာမှမျှဝေဖို့စမတ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တောင်မှပိုကောင်း, ဒီ app ကို Android မဂ္ဂဇင်းနှင့် PC World ကိုအားဖြင့်5/5ကြယ်များချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
NeoReader QR & ဘားကုဒ် Scanner
NewReader အခမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့မြန်ဆန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်စမတ်ဖို့အတွက် QR နှင့်ဘားကုဒ် Scanner ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလွယ်လွယ်ကူကူဒေတာများကို Matrix, QR, Aztec, UPC, Code ကို 1, Code ကို2နှင့် PDF ကို 128 တူသော codes တွေကိုအပေါငျးတို့သပုံမှန် 39D နှင့် 417D အမျိုးအစားများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။
ဒီတော့ဒီမှာက Android device ကိုပေါ်ဖို့အတွက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်မှအထက်ပါနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ သင်ကနောက်ဆုံးပေါ် Android နှင့်အတူစက်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, သင်ကအလွယ်တကူ Google ကလက်ထောက်နှင့်အတူ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကိုထောကျပံ့နိုငျသောကွောငျ့စိုးရိမျစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ device ကို3နှစ်4ထက်အတော်လေးအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုပါကအချို့သောဆက်ပြောသည် features တွေနှင့်အတူသင်ကူညီနိုငျသောအထက် QR ကုဒ်ကိုစကင်နာမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည် သာ. ကောင်း၏။ သင့်ရဲ့ device ကိုအတူ QR codes တွေကို scan ဖတ်အထက်ပါနည်းလမ်းများနှင့်အတူဒါပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သငျသညျမဆိုအခြားနည်းလမ်းကိုသိသလား ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရှယ်ယာလုပ်ပါ။
QR စကင်ဖတ်လုပ်နည်း ...
Whatsapp က်ဘ်ဖို့အတွက် QR ...
10 အကောင်းဆုံးဖို့အတွက် QR Code ကို ...
Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကို Scan ကို Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကို scan Android ပေါ်မှာဖို့အတွက် QR Code ကို scan